Qeybta 1: Waa maxay sababta ay u soo bixi codec for Windows Media Player?
Qeybta 2: Sida loo Download Codecs toos ah in Windows Media Player for Windows XP
Qeybta 3: Download dhinac saddexaad windows media player codec
Qeybta 4: Ma ammaan baa in la soo bixi codecs dhinac saddexaad?
Waxaa jira dad badan oo guud sidoo kale dhibcood gaar ah u doonaynin inuu dadka isticmaala ay u ogaato in sababta pack codec ama codec ah waa in lagu dhejiyaa for windows media player sida, kuwaas oo guud ahaan kordhin in la hubiyo in user waa ay awoodaan in ay ku ciyaaraan files kala duwan oo aan arin kasta sameeyo iyo dhibaatada. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiso in uu dhibcood ka dib markii lagu hayaa maanka halka rakibidda Player codec Windows Media ee Pack sameeyo:
Badanaa surin-tago waa user saaxiibtinimo oo ay la hubiyo in ugu fiican iyo technology ugu horumarsan la fududaato in la isticmaalo ayaa loo diyaariyey user ee arrintan la xiriira sameeyo.
Waxay kale oo ay mar walba la cusbooneysiiyaa oo ku dhiirigelinayaan in uu hubiyo in user marnaba wajahaya arin kasta oo arrintan la xiriira, marka ay timaado in files yeynan
Qaabeynta ee splitters iyo gartaan qalabka waa wax fudud oo toos ah in arrintan la xiriira oo halkan ay bixiyaan heer sare ah dabacsanaan.
The-tago fur hubkaas ayaa loo isticmaalaa oo halkan arrimaha iyo dhibaatooyinka la soo food waxaa la hadlay oo xalin si deg deg ah
Waxaa jira siyaabo badan si ay u hubiyaan in codecs WMP rakiban yihiin si ay si joogta ah u wajahay arimaha aan la xalin kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada farshaxanka arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in sida rasmiga ah ugu soo degsado codecs ayaa ku xusan ee URL https://support.microsoft.com/en-us/kb/291818 meesha user inay hubiyaan in kaliya ma ahan arin uu leeyahay ka dhigi kartaa waa la xaliyay laakiin user sidoo kale uu helo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Shaashada ee maqaalka waa sida hoos:
Siyaabaha in lagu halkan ku xusan waa kuwa ugu fiican iyo wax kasta ka sarreeya oo dhan ay yihiin rasmi ah oo sidaas daraaddeed fulinta waxaa la samayn karaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in talaabooyinka la raacay oo aan ka tagin wax ma aha oo kaliya ay keeni karto in ay natiijada ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira sameeyo. Si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user waa in la tasho qodobkan mar kasta oo loo xirxiro codec waxaa loo baahan yahay sidii ay u hubiyaan in user helo kaliya ma ahan natiijada ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale gobolka ka dhigi doonaa farsamadaa tahay in lagu dabaqo laga yaabaa in la hubiyo in arrinta la xalin dhaqso suurto gal ah.
Qaabkan waxaa kaloo hubin doona in user helo ugu fiican ee wax soo saarka ee taas ma jiraan wax taageero ah oo ay bixiyaan Microsoft. The fudud oo afka lama ilaawaan ah ee maqaalka sidoo kale hayaa users dhawrsan oo sidaas daraaddeed rakibo iyo tallaabooyinka kale ayaa sidoo kale noqon fudud sida reading noqon sare oo uu tutorial helo farsamo. Geedi socodka saddex tallaabo ah oo sahlan loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah xarunta farshaxanka nooc kasta oo windows media player ka dhigi doonaa.
Habka fudud waa wax been ah ee muhimka ah ee tutorial oo dhan iyo sabab la mid ah ay tahay sida ugu fiican oo gobolka theme tahay in kani habka rasmiga ah ee degsado iyo ku rakibidda codec mid ka mid ah ugu wanaagsan ee jeer oo dhan. Sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in tutorial this waxaa la socda miciinka u dambeeya marka ay timaado rakibidda codecs oo aan arrin kasta oo danta ugu fiican ee kombiyuutarka iyo sidoo kale user dhigi.
Marka laga reebo hab-ka rasmiga ah waxaa jira oo kale ah ama aan rasmi ahayn siyaabo badan oo loo hubiyo in codec la soo bixi oo lagu rakibay danta ugu fiican ee user iyo sabab la mid ah oo qayb ka ah tutorial inay hubiyaan in user helo ugu fiican in this ka dhigi doonaa xiriira adigoo raacaya taallaabooyinka in lagu soo xusay ka yar sharaxaad ka sakhiray.
Pack ayaa warbaahinta ciyaaryahan codec ku yaal URL http://download.cnet.com/Media-Player-Codec-Pack/3000-13632_4-10749065.html waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka of pack tahay codec ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu wanaagsan oo ugu horumarsan rakiban pack codec. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ku dhowaad nooca kasta oo ka mid ah qaab iyo sidoo kale taageero guud audio la siiyaa user ee arrintan la xiriira. Dhammaan qaabab in hore ay ahaayeen aan la garanayn in WMP haatan noqon doonaa lahayn ciyaarta sida xirmadan codec hubisaa in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Webpage ee codec ayaa lagu muujiyay sida under:
Sida loo soo dejisan iyo rakibi
Ka dib waa tallaabooyinka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira
File 1. waa in loo tirinayay ayaa ay tahay in la furay WMP si qalad ah jirtey:
2.Beerta caawimaad web waa ka dibna in la riixi:
Markaas link 3.Beerta ee WMplugins waa in la riixi:
4.The fur-in link markaas waa in la dhejiyo gudahood bar raadinta sida http://download.cnet.com/Media-Player-Codec-Pack/3000-13632_4-10749065.html
5.All rakibayo tilmaamaha waa in la raaco si loo hubiyo in uu ku xirato la geliyo iyo user waa in markaas hubiyo in ciyaaryahan warbaahinta la tago oo bilowday haddana inay dhammaystiraan geedi socodka iyo soo dajiyo baakada codec buuxda. User ayaa sidoo kale awoodi doonin inuu ciyaaro faylka loo tirinayay ayaa mar ciyaaryahan la bilaabay mar kale:
Jawaabta su'aasha kor ku xusan waa mid aad u adag oo u sabab la mid ah waxaa la qaybiyaa laba qaybood oo la hubiyo in doorashada user waxaa kaliya ma la siin doorashada, laakiin sidoo kale ay hesho in la ogaado in ay tahay in codec ah lagu rakibo ama ma ku salaysan iyaga u gaar ah xukun. Dib markii ay marayaan mudnaanta iyo xoriyad dhulkeeda ka user hubaal ka heli doonaan sawir cad:
The baakad codec dibadda u ogolaan user si loo hubiyo in files waxaa si habsami leh u ciyaaray.
Baakad waxa loogu talagalay inuu daboolo baahiyaha gaarka ah ee isticmaala.
Waa fududahay in la rakibo oo u yeelo oo dhan baakad codec dibadda.
The baakad codec hubiyo in qaabeynta default ah ciyaaryahanka ugu waxaa lagu taageeray laguna ugu dambeyntii wanaajiyey.
Kuwani baakad codec soo qaddiyado badan oo ay ka mid yihiin guud ahaan khaladaad gaadmada ah iyo arrimo la xiriira
The baakad codec faragelin shaqada caadiga ah ee kale fur-tago in kor loo qaado arrimaha iyo dhibaatooyinka la xiriira arrintaas.
User waxay leeyihiin si aad u cusboonaysiiso u fur-tago si joogta ah sidaas darteed waa gumaarka ah.
> Resource > WMP > 3 talooyin ku saabsan daaqadaha media player codec